Ndị ọkachamara na mpempe akwụkwọ akọwara otú e si ewepu ebe a na-ejikwa mara mma
E nwere ọtụtụ data nke na-abụkarị n'akụkụ nke ọzọ ihe HTML. Na igwe komputa, otu webpage bụ ngwakọta nke akara, ihe odide ederede, na oghere ọcha. Ihe anyị na-aga inweta na ibe weebụ bụ naanị ọdịnaya na ụzọ anyị nwere ike ịgụta. Kọmputa na-akọwapụta ihe ndị a dị ka mkpado HTML - 1 1 1 1 hosting web. Ihe kpatara ọdịiche dị na koodu ntinye site na data anyị na-ahụ bụ software ahụ, na nke a, ihe nchọgharị anyị. Ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ dị ka scrapers nwere ike iji echiche a iji wepu ọdịnaya weebụ ma chekwaa ya maka ojiji.
N'asụsụ dị larịị, ọ bụrụ na ị mepee akwụkwọ HTML ma ọ bụ faịlụ isi maka otu webpage, ọ ga-ekwe omume iweghachite ọdịnaya dị na ebe nrụọrụ weebụ ahụ. Ozi a ga-adị na ala dị larịị na ọtụtụ koodu. Usoro dum na-agụnye ịjụ ọdịnaya ahụ na-emeghị nke ọma. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume inwe ike ịhazi ozi a n'ụzọ dị mma ma weghachite akụkụ bara uru site na koodu dum.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị na-eme nchọpụta adịghị arụ ọrụ ha iji nweta eriri HTML. Enwere uru uru nke onye ọ bụla na-agba mbọ iru. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-arụ ọrụ ahịa ịntanetị nwere ike ịdị mkpa ịgụnye amaokwu pụrụ iche dịka iwu-f iji nweta ozi sitere na ibe weebụ. Iji mezuo ọrụ a na ọtụtụ peeji, ị nwere ike ịchọ enyemaka ma ọ bụghị naanị ike mmadụ. Scrapers web saịtị bụ bots ndị a nwere ike iwepu weebụsaịtị na ihe karịrị otu nde peeji nke n'ihe gbasara awa. Usoro dum choro ibia ime ihe di mfe. Na ụfọdụ asụsụ mmemme dị ka Eke Ọgba, ndị ọrụ nwere ike ịdebanye ụfọdụ crawlers nke nwere ike ibelata data weebụ ma wepụ ya n'otu ebe.
Iwepu ihe nwere ike ịbụ usoro dị ize ndụ maka ụfọdụ weebụsaịtị. E nwere ọtụtụ nchegbu na-agbanwe banyere iwu iwu nke ịkpụcha. Nke mbụ, ụfọdụ ndị na-eleba anya na nzuzo ha na nzuzo. Ihe a na - egosi na nsogbu nwebisiinka, yana ịghasị ọdịnaya zuru oke, nwere ike ime na ihe omume nke iwepu. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị mmadụ na-ebudata otu ebe nrụọrụ weebụ maka iji ntanetị. Dịka ọmụmaatụ, na n'oge gara aga, e nwere ihe gbasara Craigslist maka ebe nrụọrụ weebụ a na-akpọ 3Taps. Ụlọ ọrụ a na-ekpuchi ọdịnaya weebụsaịtị ma na-edeghachi ndepụta ụlọ na ngalaba nkewa. Ha mesịrị biri na 3Taps na-akwụ ụgwọ $ 1,000,000 na saịtị mbụ ha.
BS bụ ngwaọrụ setịpụrụ (Python Language) dika nhazi ma ọ bụ ngwugwu. Ị nwere ike iji Mmasị Mara Mma iji wepu ebe nrụọrụ weebụ sitere na ibe data na weebụ. Enwere ike ikpochapu saịtị ma nweta data na ụdị nke ahaziri ya. Ị nwere ike ịse URL wee dezie otu ihe akọwapụtara gụnyere usoro mbupu ọpụpụ anyị. Na BS, ị nwere ike mbupụ na ụdị usoro dịka XML. Iji malite, ịkwesịrị ịwụnye nsụgharị BS nke ọma ma malite site na Python isi. Ihe omuma ihe di mkpa ebe a.